मुलुकी ऐन ‘इलाज कसुर’ व्यवस्था संशोधन ‘फास्टट्र्याक’बाट – Health Post Nepal
२०७५ भदौ २८ गते १८:३९
सरकारले मुलुकी ऐनको ‘इलाज कसुर’सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन प्रक्रिया ‘फास्टट्र्याक’बाट अगाडि बढाएको छ ।
१ भदौदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद १९ मा रहेको इलाजसम्बन्धी महलले स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमै समस्या निम्त्याएपछि सरकारले ‘फास्टट्र्याक’बाट संशोधन गर्न लागेको हो ।
यसअघि यो प्रावधानलाई लिएर चिकित्सकहरूले देशव्यापी स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन सुरु गरेपछि सरकारले १८ भदौमा संशोधन गर्ने सहमति गरेको थियो । सहमतिअनुसार उक्त दफामा गर्ने संशोधन प्रस्ताव स्वास्थ्यले पठाइसकेको छ ।
‘संसद्बाट यसको हल खोजिन्छ ।’ उनले ऐन संशोधन गर्दा बिरामी पक्षको समेत हितलाई ध्यानमा राखेर काम गरिने बताए ।
नियमित प्रक्रियाबाट ऐन संशोधन गर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट सहमति लिएर सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएर प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ । तर, ऐन लागू भएपछि उपचारमै समस्या उत्पन्न भएको भन्दै सरकारले अर्को प्रक्रियाबाट टुंग्याउने बचन दिएको नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले बताए ।
यसलाई तत्काल टुंग्याउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेत सकारात्मक भएसँगै उनले द्रुत प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । ओलीले यसको जिम्मेवारी नेकपाका नेता एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई दिएका छन् । संघको टोलीसँग नेम्वाङले भेट गरिसकेका छन् ।
तत्काल टुंगोमा पुर्याउनकै लागि राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा परेका संशोधनहरूका आधारमा संशोधन गरेर सुरुमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्ने तयारी छ । सो समितिमा प्रतिपक्षी सांसद राधेश्याम अधिकारीले संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
सोही प्रस्तावमा टेकेरै राष्ट्रिय सभा विधायन समितिमा संशोधन माग गरिएका विषय थप्ने सरकारी तयारी छ । विधायन समितिबाट पारित गरेर राष्ट्रिय सभा हुँदै त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा लगेर ऐन संशोधन टुंग्याउन सरकार सहमत भएको हो ।
नेता नेम्वाङले चिकित्सकका चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्न संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताए । ‘अरूले पनि डाक्टरका कुरा सुन्नुपर्छ, डाक्टरले पनि बिरामीका कुरा सुन्नुपर्छ,’ नेम्वाङले हेल्थपोस्टसँग भने, ‘संसद्बाट यसको हल खोजिन्छ ।’ उनले ऐन संशोधन गर्दा बिरामी पक्षको समेत हितलाई ध्यानमा राखेर काम गरिने बताए ।
संशोधन टुंगोमा पु–याउन नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मकान्त बास्कोटा र रजिस्ट्रार डा. दिलीप शर्मा लागिपरेका छन् । संघका तर्फबाट महासचिव डा. कार्कीसहित अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ र पूर्वअध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले वार्ता र सहमतिका लागि सहजीकरण गरिरहेका छन् ।
संघको टोलीले बिहीबार पनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनालाई भेटेर संशोधनको अवस्था र प्रक्रियाबारे छलफल गरेको थियो । सोक्रममा तिमल्सिनाले सरकारसँगको सहमतिअनुसार राष्ट्रिय सभाको समितिबाट टुंगिनासाथ राष्ट्रिय सभाले छिट्टै टुंग्याउने बताएका थिए ।
तर, स्वास्थ्यबाट पठाएको प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयले अगाडि बढाइसकेको बताए पनि राष्ट्रिय सभा विधायन समितिमा भने अहिलेसम्म पुगेको छैन । कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको प्रस्ताव कानुनमा नरोकिएको बताए । ‘ढिला गरेर आएका कुरा ढिला गएका छन्, तर कुनै पनि कुरा हामीकहाँ रोकिएको छैन,’ ढकालले हेल्थपोष्टसँग भने ।
स्रोतका अनुसार कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव अगाडि बढाउन ढिलाइ गरिरहेका कारण प्रक्रिया सुस्त भएको छ ।
कुन मितिमा संसदीय समितिमा गएको भन्ने प्रश्नमा उनले ‘आफूले तिथिमिति टिपेर नराखेको र स्रेस्ता नै हेर्नुपर्ने’ बताए । तर, राष्ट्रिय सभा विधायन समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीले भने चिकित्सक संघसँग भएको सहमतिअनुसारको विषय समितिमा पुगिनसकेको बताए । ‘मन्त्रालयसँग सहमति भएको भनिएको छ, तर समितिमा आइपुगेको छैन,’ गिरीले भने ।
विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेको संघका प्रतिनिधिले यसबीचमा सरकारका प्रतिनिधिसहित विभिन्न ‘इन्फ्लुएनसियल’ व्यक्तिसँग भेटघाट गरेको थियो । तत्काल ऐन संशोधन नभए जुनसुकै समयमा देशभर कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी संघले दिँदै आएको छ ।
One thought on “मुलुकी ऐन ‘इलाज कसुर’ व्यवस्था संशोधन ‘फास्टट्र्याक’बाट”
Lamsaldsays:
Aja bharkharai matra sarbocha Adalat le yeuta antarim adesh diyeko xa ..tyo tathakathit upobhokta manch ko rit ma sunuwai gardai jasma swasthya mantralay ra NMA bich bhayeko5budhe sahamati lagu nagrnu re …yo adesh le aba samsodh prakiya nai rokiyo ni